သောသီခို: တန့်ယန်းမြို့နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်
တန့်ယန်းမြို့နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်
၁၇နှစ် ကျော် ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးတဲ့အဖွဲ့ တွေ ရဲ့လက်ရှိအနေအထား... ပြီးရင် ဘယ်သူ့ အလည့်လည်း စသဖြင့်ပေါ့...
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းလို့ လူသိများတဲ့ SSPP/SSA တပ်တွေနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ တန့်ယန်းမြို့နယ် အတွင်းမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့ ဒီကနေ့ ထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ တန့်ယန်းမြို့နယ် ၇မိုင်စခန်း အရှေ့ဘက် ကောင်းဆန်းဆိုတဲ့ ပလောင်ရွာအနီးမှာ ဒီနေ့မနက် ၁ဝ နာရီခွဲလောက်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေ တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှုး စိုင်းလက ပြောပြပါတယ်။
“ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့နေရာက တန့်ယန်းမြို့နယ်ထဲမှာပဲ မနေ့ကနေရာနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလေ ၁၀ နာရီခွဲမှာ ခမရ ၃၂၂ နဲ့ မနေ့က ဖြစ်တဲ့တပ် ၁၀ နာရီခွဲကနေ စဖြစ်တာ တနာရီကျော်ကျော်လောက် အချိန်ကြာသွားတာပေါ့၊ နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတော့ ဘာမှမသိရသေးဘူး ဒီနေ့ကျနော်တို့ လားရှိုးမှာထိုင်နေတဲ့ ရုံးတာဝန်ခံနဲ့ တိုင်းမှုးဆီသွားပြီးတော့ တွေ့ဆုံခိုင်းတယ် အဲဒီဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီး အဲဒါမသိရသေးဘူး”
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ နှစ်ဖက်ကျဆုံးတဲ့ အခြေအနေတွေကိုတော့ အခုအချိန်အထိ မသိရသေးပါဘူး။
အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာတွေဟာ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အိမ်ထောင်သည် မိသားစုဝင်တွေ အခြေချနေထိုင်ဖို့ အစိုးရနဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူထားတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှုးစိုင်းလက ပြောပါတယ်။
“မနေ့ကဖြစ်တဲ့နေရာရော ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့နေရာရော ကျနော်တို့ တပ်မဟာ ၃၆ က တပ်မိသားစုဝင်တွေ နေရာချထားရေး စီမံကိန်းရာထားချက် နေရာတွေပဲလေ အခုက အဲဒီနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သူတို့က မိသားစုဝင်တွေချတဲ့နေရာကို သူတို့ထိုးထားချင်လို့လား သဘောတူညီထားတယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့က နိုင်ငံတော်ကကူညီမယ် ဒါတွေလဲ ကျနော်တို့က မစောင့်နိုင်ဘူးလေ၊ ကျနော်တို့ အခြေချဖို့ တပ်မိသားစုဝင်တွေ စိုက်ပျိုးရေးတို့ ဘာတို့ အဆောက်အအုံတွေလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့လဲ တတ်နိုင်သလောက် တည်ဆောက်နေတယ် သူတို့ဆီကိုလဲ တရားဝင် တင်ပြထားတယ်”
SSA မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဟာ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထားတာ တနှစ်ကျော်ကြာနေပေမယ့် အခုအချိန်အထိ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး သိသိသာသာ တိုးတက်မှု မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Posted by PKD at 6:51 AM
မာယာတွေပေါ်မှာ သွေးပျက်ပြီးတော့ အိပ်မနေနဲ့
KNU ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအစည...
Papun Situation Update: Lu Thaw Township, March 20...
တိုက်ပွဲဖြစ်​ပေမယ့်​ ​တွေ့​ဆုံပွဲ ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး​...
ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် မော်နီတာ ဂျာနယ် အင်တာဗျုး
တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီမ...
အစိုး​ရရဲ့​ ကား​ဝယ်မည့်​ အစီအစဉ် လွှတ်​တော်အမတ် အ...
အစိုးရနှင့် UNFC ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ယူအဲန်အက်ဖ်စီ အ...
တ ချို့ က စ ပျ စ် သီးဖြ စ် တ ယ် ၊ တ ချို...
“သို့သော် အချိန်က စောနေသေးတယ်” လို့ ဆိုတော့ – Tu M...
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ ထိုင်းလိုလား
တန့်ယန်းမြို့နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်ေ...
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း SSA တပ်နဲ့ အစိုးရတပ်တွေ တိုက...
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ် ဦးလဂွန်ငန်ဆိုင်းနှင့် RF...
Tribute to Phadoh Mahn Shar on the fifth anniversa...
ကချင်စစ်ပွဲ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ရုပ်သံ)
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြည်တွင်းဌာနေမဲ့ ဒုက္ခသ...
ဖဒိုမန်းရှာတနှစ်ပြည့်ရုပ်သံ(၂၀၀၉) အပိုင်း တစ် + နှ...
ထိုင်းတွင်နှိပ်စက်ခံရသော ကရင်မိန်းကလေးငယ်၏သတင်း (ရ...
ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် တိုင်းရင်းသားအရေး (အသံ) BBC...
Tribute to Padoh Mahn Sha Lah Phan on the fifth an...
"ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ" - (ပဒိုမန်းရှာအမှတ်တရ)
ရိက္ခာသယ် အစိုးရစစ်ကား ၁စီး မိုင်းထိ၍ နှစ်ဦးသေ၊ နှ...
KNUနဲ့ အစိုးရ ကြား လုံးဝ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖြစ်လာမည...
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင် တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေတွင်ကျင်းပ...
၆၅နှစ်မြောက် ကရင့်အမျိုးသားနေ့ (တော်လှန်ရေးနယ်မြေ ...
အီးတူးထာ တွင်ကျင်းပသော ကရင်အမျိူးသားနေ့ 
ကရင်လူထု ငြိမ်းချမ်းရေး ထောက်ခံပွဲကို ပန်းတနော်မြိ...
(၅၃)နှစ်ပြည့် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့(မဲလ်ဘုန်းမြို ...
(၆၅) နှစ်ပြည့် ကရင့်အမျိူးသားနေ့ သို့ ပေးပို့ သော ...
ဆဌမအကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိူးသမီးအစည်းအရုံး(KWO) ညီလာ...
KNU ဥက္ကဌ နှင့် ကွယ်ကလူသတင်းဌာန အင်တာဗျူး
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လို...
KIO နဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ KIO နှင့် ဗမာအစိုးရ ဆွေးနေ...
အမျိုးသမီးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပ...
ရဲတွေကို လူလိုသိအောင် သင်ပေးနေတဲ့ ကိုနေမျိုးဇင်
အစိုးရနှင့်စစ်တပ်အကြံ့အစည်ဟာ KIO ကိုအမြစ်ပြတ်ခြေမှ...
လောင်းကစားဝိုင်းများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး